Etu ị ga-esi jiri mmanụ mmanụ dị mkpa dị na Shower - Nnukwu Mkpa mmanụ | AromaEasy
Ihe na August 26, 2020 August 26, 2020 by Matt
Ihe post a bụ akwụkwọ nduzi AromaEasy kachasị maka otu esi eji mmanụ dị mkpa na mmiri.
Ibunye mmiri ole ị dị mkpa n’ime mmiri ịsa ahụ n’abalị bụ nnukwu ụzọ iji dozie ma zuru ike mgbe ogologo ụbọchị gasịrị.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ mmadụ amatala, ma ọ dịghị ihe ọzọ n'otu akụkụ, mmekọrịta dị n'etiti ike ọrụ ebube na uru ime mmụọ nke mmanụ dị mkpa.
Agbanyeghị, iji mmanụ dị mkpa ịsa ahụ na-elegharakarị anya, ọbụlagodi ndị anyị na-eji mmanụ dị mkpa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-eme kwa ụbọchị.
A na-ejikarị mmanụ dị mkpa mee ihe na-asa ahụ, n'ihi na ịsa ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike inyere mmadụ aka ịkwụsị ya. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ anaghị enwe ọkara elekere mgbe niile ma ọ bụ karịa ka ha zụọ maka ịsa ahụ zuru ike. Kama, ha na-ahọrọkarị maka mmiri ọsụsọ ngwa ngwa. Creatingmeghị ahụmihe ahụ na-atọ ụtọ na mmiri ịsa ahụ dịka ị ga-asa ahụ bụ ohere furu efu iji gwọ ahụ gị, uche gị na mmụọ gị.
Mkpa mmanụ dị mkpa n'ime igwe mmiri
Ah, Lavender na-eme dị ka swiss mma na ụwa aromatherapy. Uzo eji eme ihe na Lavender bụ obere isi ya na nsonazụ ndị mmadụ na-eme ka ọnọdụ ha dajụọ. Ndị mmadụ na-ejikwa lavender iji mee ka ntụrụndụ na -akpata mmetụta dị ala, nke na-enyere ha aka ihi ụra nke ọma.
Echere na Lavender bara uru iji belata mgbu na mbufụt. Lavender mmanụ dị mkpa nwere uru na-ebelata nchekasị, na-eme ya nhọrọ zuru oke maka ịsa ahụ n'abalị. Na mgbakwunye, ndị mmadụ na-ejikwa lavender na-emeso isi ọwụwa na migraine dịka ọgwụgwọ ọdịnala.
Mmanụ Ala Dị Mkpa Lemọn
N’inwe ike, lemon na citrus ndị ọzọ mkpa mmanụ na-abara ndị mmadụ uru mgbe etinyere ya na aromatherapy.
N'ime ihe ọmụmụ na 2008, a hụrụ isi ísì ụtọ nwere nsonaazụ dị mma na ọnọdụ ndị na-arịọ arịrịọ. N’ezie, mmanụ mmanụ dị mkpa lemon nwere ike ime karịa - ọ nwere ike melite sistemu na antiseptik, antifungal, antimicrobial, astringent, na detoxifying Njirimara.
Dika mmanu citrus ndi ozo, mmanu mmanu mmanu di nkpa. N'ikwu ya n'ụzọ, ejila mmanụ citrus dị n'ahụ gị pụọ n’anyanwụ.
Eucalyptus dị mkpa mmanụ dị mma maka ọgwụgwọ ịhịa aka n'ahụ mgbe ịsa ahụ. Gosiputa belata ihe mgbu na mgbu na nkwonkwo na akwara, Eucalyptus na-ejikarị ọgwụ aromatherapy n'oge ịhịa aka. Ọzọkwa, ọtụtụ mmadụ na-ahụta ya ume ma na-akpali akpali. Na mmanụ eucalyptus dị mkpa nwere ike imepee akụkụ akụkụ imi ya na-eme ka obi dajụọ.
Mpempe crisp nke mmiri manu mkpa dị obere dị nkọ ma sie ike karịa nke ọtụtụ mmanụ ndị ọzọ. Dịka ntuziaka anyị na mmanụ ndị ọzọ dị mkpa, obere karịa, yana mmanụ oke osimiri nwere ike ịkpasu iwe. Mgbe ị na-eji mmanụ mmanụ eucalyptus na mmiri ịsa ahụ, ị ​​nwere ike ị belata ego ahụ. You nwere ike ịchọ mix Eucalyptus na mmanụ oroma dị ụtọ mmanụ ma ọ bụ sandalwood iji wee kpasuo iwe gị.
Biko rụba ama na ọtụtụ mmadụ nwere ọmịiko na mmiri oke osimiri. I nwere ike iji mmanụ a dị mkpa kpachara anya. Youkwesịrị ịtụle ụmụ nwanyị dị ime, ụmụaka, na anụ ụlọ mgbe ị na-eji mmanụ eucalyptus dị mkpa.
Mmanụ ndị ọzọ dị mkpa eji eme ihe maka ịsa ahụ gụnyere:
Emekwala m mmanụ ndị a dị mkpa maka ebumnuche dị iche.
Maka nkasi obi
Dị ka eucalyptus, pepemint na-enye nkwado dị ukwuu maka imeghe ụzọ ikuku na ịkwalite mmetụta nke iku ume dị mma. Na mmanụ mmanụ dị oke mkpa bụ ihe ebumpụta ụwa na ebumnuche.
Maka Enyemaka Oge Oge
Iji belata nsogbu oge dị ka anya mgbu, imi mmiri, na akpịrị, ị nwere ike iji ọtụtụ mmanụ dị mkpa na ịsa ahụ. Mmanụ Tea dị mkpa mmanụ na-enyere aka ịkwado usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Na-enye mmanụ dị ezigbo mkpa bụ nhọrọ dị mma maka ihe niile na-akụjụ, gụnyere mmeghachi omume na-enye obi ụtọ.
Maka njikwa Mood
Mmanụ Citrus dị ka Orange ụtọ dị mma maka iwulite ọnọdụ. Frankincense na-enyere aka idozi ọnọdụ ma na-akwalite mmetụta nke izu ike. Ọkacha mmasị anyị na-akụ mmanụ dị mkpa. Jikọta otu n'ime ha na oroma ọhịa ka ọ nwee mmetụta nke Zen na mmiri ịsa ahụ.
Maka izu ike nke nrụgide
Mgbe ụfọdụ mmiri ịsa mmiri ọkụ bụ naanị ihe ịchọrọ mgbe ogologo ụbọchị gachara. Mmanụ ndị dị mkpa dị ka Lavender, Roman Chamomile, Ylang Ylang, na Arborvitae na-akwalite mmetụta nke ịdị jụụ na izu ike. Jiri otu ma ọ bụ gwakọta mmanụ ndị a maka ngwakọta spa-ga-ewepụ gị!
Mbelata Mwepu Uche
Ever nwetụla mgbe ị tetara n'ụra na ụzụ? Gbalịa ịdị na-eme mmanụ dị ka pepemint, lavender, frankincense, na Rosemary n'ụtụtụ ụtụtụ gị.
Ike na ume
Anyị niile nwere ike iji mmanụ dị mkpa maka ntakịrị enyemaka iji bido n'ụtụtụ. Mmanụ ndị dị elu dị ka Bergamot, Mkpụrụ osisi vaịn, Rosemary, na mmiri na mmiri bụ eucalyptus niile na-atụgharị, na-ekwughị banyere isi ha na-enye ume ọhụrụ. Gbalịa ịgwakọta mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi grape, pepemint, na Rosemary. Nchikota a bu onye agha ada mba nke oma.
Mara: Ikwesiri iji mmanụ lotion ma ọ bụ nke ndị na-ebu mmanụ tee mmanụ dị mkpa tupu ị na-eji mmanụ dị mkpa eji eme ihe. Dịka anyị tụlere na mbụ, almond, aki oyibo, jojoba ga-eme nke ọma ma agwakọta ya na mmanụ dị mkpa. Detuo ma ọ bụrụ na ejighị n'aka ma mmanụ dị gị mma.
Maka ama ndị ọzọ, biko gaa na mmanụ dị mkpa ịhịa aka.
Pịa Ebe a shopzụta mmanụ dị Mkpa Anyị na-ere ugbu a.